Free Pender EA - Best Forex EA's | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
Nke a bụ nsụgharị nke nnwere onwe zuru ezu Onye Nlekọta Ndụmọdụ ọkachamara.
A na-ere ahịa site na iji iwu echere na ọkwa dị mkpa, ebe ọnụahịa ahụ kwụsịrị n'oge oge na-adịbeghị anya.
The Forex EA gụnyere usoro abụọ nke nchọpụta ọkwa dị mkpa. Enwere ike iji ha ma ọ bụ otu.
A na-edozi Virtual StopLoss.
A naghị eji atụmatụ “dị ize ndụ” eme ihe.
Esemokwu si zuru ezu mbipute :
1. Na-emeghe naanị ọnọdụ.
2. Ahịa na nsonye 0.01 nanị.
Broker na nkwụnye ego
Ihe ọ bụla 5-digit broker na-agbasa ma na-egbu ngwa ngwa kwesịrị ekwesị maka trading.
Ntinye ego kacha nta tụrụ aro - $ 50.
Free Pender EA Ego abụọ na oge
Ịzụ ahịa na EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD ma ọ bụ na ụdị ego ọ bụla na obere mgbasa na-atụ aro ya.
Oge Oge - H1.
OldStrategy - enwere ike ịtọ eziokwu ma ọ bụ ụgha. Ọ bụrụ eziokwu, EA jiri atụmatụ nke nsụgharị ndị gara aga.
NewStrategy - enwere ike ịtọ eziokwu ma ọ bụ ụgha. Ọ bụrụ eziokwu, EA na-eji atụmatụ ọhụụ.
StopLoss - mebere ọnwụ kwụsịrị na isi.
VirtualTrailing - enwere ike ịtọ eziokwu ma ọ bụ ụgha. Ọ bụrụ eziokwu, EA na-ezochi ọkwa nkeLLLss gbanwere site na onye na-ere ahịa.
Delta - si na ọnụahịa ọnụahịa dị mkpa maka iwu echere.
MaliteHour - oge ịmalite azụmaahịa.
EndHour - oge ịkwụsị ahia. A ga-ehichapụ iwu echere ugbu a.
Oge nkwụsị - mmegharị maka oge nchekwa ụbọchị.
EAMagic - ọnụọgụ anwansi nke EA, nke na-enye ya ohere ịmata ọdịiche dị n'iwu ya.
GosiInfoPanel - enwere ike ịtọ “eziokwu” ma ọ bụ “ụgha”. Ọ bụrụ “eziokwu”, a ga-egosipụta nkwupụta ozi na eserese nke ụzọ azụ ahịa.
Panel_Language - asụsụ nke ngalaba ozi.
TextColor - font agba nke ozi obubọk.
Ntọala akwadoro na-edozi site na ndabara.
Site na ndabara, MaliteShine na EndHour na-edozi maka mpaghara oge njedebe GMT + 2. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dozie parameters ndị a dịka oge mpaghara nke ọnụ gị.